murume - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'murume'
Joo apedza vakadzi vevanhu
Manje Kira akabva kubasa kwake Buruwayo achimboshanyira vadzimai kupfanyas. Akaburukira patownship akagotanga kunwa hwahwa negen'a romuraini make. Gen'a rikagotanga kumusasa kuti madzimai ese ari muraiini make apera kukwirwa naJoo.
Asvika kumba vadzimai vakamugamuchira samazuva ose.
Iye aingofunga nyaya iya but apa achingofungawo kuti kuda wake ndiye akasara kukwirwa naJoo. Akagoti kuna Vadzimai:
"Ko ndanzwa kuti Joo apedza kukwira vakadzi vavanhu muraini kusiya kwomumwe chete
Vadzimai: "MMmm ungava ani iyeye wakasara aa Pamwe
murume mukadzi hure
Matsotsi emu harare anetsa
mwe shasha kuHarare uku yaive nebabes so manje. But babes yakange yakaroorwa time-time, so it happened kuti on one of the days yakabatikidzwa iri muden neHusband yegero, so he had to rush out without his pants and shoes, just the shirt.
Upon getting home, knowing his wife would need an explanation, he cooked one. "..mai bhoi ndarohwa nematsotsi, ndabirwa trousers neboots.." Shasha felt better payakanwza wife
"...umm veduwe, inga matsosti anetsa muno.., (pause) ..., kubva vapfekedza victim yavo condom?"
murume mukadzi condom chikomba
murume mukadzi mukwasha ambuya muroora
Murume nemukadzi vakasangana pasina mumwe munhu zvake. Murume ave kupfuura asina kumbotaura chinhu nemukadzi uyu, zvakashamisa mukadzi kuti chirudzii.
Mukadzi akati hazviite kuti murume apfuure asina kumbotaura neni. akati regai ndimutaudze ini Akati: "Nhai mukwasha ko dzimbori nguvaiko?"
Murume, sezvo watch yanga isisa shande akangoti, "A a a
amai yangu yamira". Mukadzi uya kwavekuti zvakanakai mukwasha.
Vave kuparadzana murumewo kwave kuti : "Ko imi amai munobva kupi?"
Mukadzi kwave kungoti: "Aa kwangu kwaZvimba mukwasha"
Murume wangu auya
Then there was this couple in bed at night, Madamu vakabva vavhumuka.
"MURUME WANGU AUYA, MURUME WANGU AUYA KANI!!!!!!!!!!
Husband ichinzwa izvi yakabva yajamba from bed ikabuda mumba ichimhanya isina kupfeka.
Payakasvika pagate ndipo payakarealizer kuti iri padheni payo.
murume mukadzi bhedhuru
Shingi aiva mubarber achigerwa zvake ndokubva awona mumwe mukadzi akanaka chaizvo achitsvaira mubarber mubarber umu.
Tonde: ende sisi makanaka
Mukadzi: maita basa
Tonde: do you mind if i take you out after work
Mukadzi: but i am married
Tonde: you can tell your husband kuti unenge wanonoka kupedza basa
Mukadzi: ok muudzei mega ndiyei arikukugerai
Wife and Hubby watching soccer
Wife and hubby watching soccer:
Wife: sweetie ko uyo akapfekerei zvakasiyana nezvevamwe?
Hubby: Ndi keeper anogara pagedhi.
Wife: Ko keeper uya zvaava kumhanya mukati, asiya ghedhi nani?
Hubby: Uyu ndi refree, haasi keeper.
Wife: Saka refree anoita basa rei?
Hubby: Ndiye ano controller game.
After 10 min,
Wife: Ko refree uya zvaamira paraini futi?
Hubby: Uyu ndi assistant refree kana kuti linesman.
Wife: Asi arikuda kusabhura refree ari mukati?
Hubby: No, anoshandira paline ipapo.
After 30 seconds,
Wife: Saka mureza waasimudza uwo iflag yekunyika ipi?
Hubby: Nhai Mwari ndaparei nhasi? Uku team yangu irikurohwa....uku ndirikubvunzwa zvisina maturo...!!
murume mukadzi world cup 2014 world cup
Askana siyanai nemurume wangu
Private caller - Hello am l speaking to Anita?
Private caller - Askana siyanayi nezvekufonerana nemurume wangu handiti!!!
Anita -Ndanga ndatya ndafunga kuti muchati ndirege kurara naye.Kana zvakadaro iribho. gudnight
murume mukadzi small house
Professor vachitukana nemukadzi wavo;
Prof: hauna kufunda ndosaka wakapusa nekuzungaira.
Wife: akazungaira nekupusa ini newe ndiani,ndiri nani ndakaroorwa naprofessor, ko iwe wakaroora mukadzi asina kana grade 7.
murume mukadzi kudzidza
Mumwe murume anga ane an artificial hand akasvika parufu, pakubata maoko he removed his hand and said ingotambidzanai ikoko kusvika rwadzoka kuno....
murume rufu chirema
Private number hello...
Takagara mukombie fon yevamwe blaz yorira, ndobva vakumbira kuti driver adzikise volume...kombie yese vanhu ziiii. Blaz: Private number....Hallooo????, eish!!! "handisikunzwa chinhu",(ndobva aisa fon paloud speaker). Caller: (Shouts) "Ndati Wadyirei polony yemwana?"
murume mukadzi kombi hwindi
6 Reasons Dzakanakira Doro Kudarika Mukadzi
ukatenga doro unokwanisa kudaidza hama neshamwari kuti huyai tinwe doro randatenga asi pane madzimai panonetsa hapadaidzanwe kunyange munin'ina wako chaiye;
ukatengadoro unovhura wega hakuna munhu anozofamba achitaura kuti doro rina Banda ndini ndakarivhura mukadzi wako unonzwa mumwe achiti takabvaneko
ukatenga doro kana risingaite unokwanisa kurichinja wopihwa rimwe bt kana ari mukadzi ma1;
doro rakafanana harina kuti ndere kunzvimbo ipi asi unonzwa vamwe vachiti machawa akapenga;
doro unorinwa kubva musi wa 1january kusvika musiwa 31 december bt mukadzi rimwe zuva anenge akaneta mamwe mazuva anenge ariku.........
pagaro pedoro pakanyorwa kuti alcohol may be harzadas to health unonwa uchitoziva kuti ndinofa bt pagaro remadzimai hapana kunyorwa unotozo yeuka wakufa
the devil is a liar parufu
Mukadzi akanzi ape speech parufu rwe murume wake...akati...the devil is a LIAR !! Vanhu vese vakati AMEN !...akati...Satan atora murume wangu... BUT HE IS A LIAR MHANI. vanhu...vakati AMEN....
akati ..IN THE NAME OF JESUS,,,MANGWANA CHAIYE NDINENGE NDANE MUMWE....vanhu vakati ziiii
murume mukadzi church rufu pentecostal
tione number yawafona...
mumwe murume akakwira kombi ndokuda kuona pfungwa dzevarume vaivemo kwakudialer 3 digits ndokunyepedzera kufona hanzi
"sorry babes handichakwanisa kuuya ndakwira kombi nemrume wako",
kkkkkkkkkkk hanzi varume vakavava zvikanzi tione number yawafona 
murume kombi chikomba
Murwere wekuda mazai
Zvinoita munhu kana arwara akomana zvakaoma.
Vamwe mai vakaenda koona
murume wavo ainge arwara muchipatara. Vakamuigira mazai akakafraiwa
zvakanzi nemurume wacho: "handisikuda akafraiwa dai mauya
Mangwana mukadzi uya ndokuuya neakaboiliswa zvakanzi "aiwa
dai mauya neakafraiwa ".
Ava mangwana acho mukadzi uya ndokuuya
neakafraiwa neakaboiliswa zvakanzi nemurume wacho: "aiwa, amafraya aya dai
ariwo amaboirisa aya akaboiler dai ariwo amafraya".
murume mukadzi mazai chipatara chikafu
kuri kurehwa imi mai tembi
Amai tembi na Baba tembi vakaenda kwachiremba mai tembi ndokuitwa
operation zvakanzi nachiremba operation yamaitwa iyi zvotoreva kuti
muchaita 2 weeks pasina bonde .
Zvakanzi na mai tembi, "mazvinzwa ka baba
Zvakanzi nababa tembi "hongu ndazvinzwa but apa doctor arikureva
imimi mai tembi."
murume mukadzi chipatara bonde
kutsvaka expiry date
WIFE: Kwakanaka here swity?
HUSBAND:: Ko indava mai mfana ?
WIFE : Wabvira makuseni wakabata marriage certificate iroro indava...?
HUSBAND: Ndiri kutsvaga pane Expiry Date !!!!
driver dzora volume
Vamwe mai mukombi vakafonerwa vakati driver ndinokumbirawo udzikise volume yeradio yako. Driver akadzikisa volume vanhu vese mukombi vakanyarara. Mai vaye vakaisawo foni yavo pa loud vakati: "Hallo baba vaChipo matiiko?" zvikanzi nemurume: "Ndati sei wasiya usina kurasa weti yako irimubucket?"
murume mukadzi kombi nhamo
kana maroorana zvino pinduruka
# John.... Ndikuona seuri kunonoka
# Mary.... Urikuda kuti ndiende?
# John.... Usafunge izvozvo
# Mary .... unondida here?
‪#Mary.... wakambo danana nemumwe munhu here tiri tese?
#Mary.... Uchagara neni nguva dzose here?
#John.... Nguva dzose ndikawana mukana
#Mary.... Uchandirova here?
#Mary.... Ndovimba newe here?
#Mary.... mudiwa wangu....
VAZOROORANA: Verengai muchibva kuzasi kuenda kumusoro!!
murume mukadzi adult hure kombi bhawa
Umwe mukadzi akafonera mapurisa kuti: "murume wangu aenda neGirlfriend saka ndave
kutevera kwavaenda. Ndine pfuti zvekuti ndikavawana ndiri kushudha vose"
MaPurisa akabvunza kuti vaenda kupi? Mudzimai uya akati; "Vaenda kuBand kwaMacheso kuVITO"
Mapurisa akabva atora mota ndokumhanya kuti vatangire mai vaya kusvika. Mupurisa akasviko bvutira Macheso Mic ndodaidzira achiti,"
"KANA MUINE MURUME WEMUNHU ARIMUNO NEGIRLFRIEND MUKADZI WAKO ARI KUPINDA MUNO IZVOZVI ANE PFUTI YEKUSHUDHA IWE NEGIRLFRIEND YAKO MOSE"
Hanzi door rakaita duku varume vose vachitiza kusanganisira naiye Macheso wacho.
murume mukadzi hure small house Macheso
murume mukadzi mukwasha tezvara baba
murume mukadzi mwana dare gupuro
murume mukadzi chikomba rufu
mama vabuda neka radio
Husband : Babes uripi ?
Wife : Im home
Husband : Kunyepa ita on radio
Wife : Radio on shhhhhh
Next day the same thing until one day Zesa raenda murume ndokuti let me surprise my wife wanikwe kumba kune mwana ari ega.
Baba : Iwe amai varipi
Mwana : Hameno vangobuda vakabata ka radio makuseni
murume mukadzi mwana zesa
Advantages enhamo dzedu mu Zimbabwe
Advantages enhamo dzedu muZIM:
Umwe mukadzi akabata murume wake aine small house. Akatsamwa akaenda kumba kumba ndokusvikogadzika poto yake yemafuta pastove afunga zvekudira murume mafuta anopisa. Akagara hake achimirira murume kuti auye mafuta achisanopisa. Murume achingopinda mukadzi akabva angoti poto iya bidzu ndokudira murume wake. Murume akashaya kuti ko mukadzi akuita sei. Mukadzi ndipo paakazoona kuti kwanga kusina magetsi....
murume mukadzi nhamo zesa magetsi mafuta
Aunty Rhoda - kuonda
Dear Aunyt Rhoda:
Ndirikuda kuonda asi zvirikuramba. Ndaedza kudya maHealthy Foods, nekujogger asi zvirikuramba. Please help.
Reply from Aunt:
Tora phone yemurume wako uende kuwhatsapp messages. Unoswera waonda!
murume mukadzi whatsapp Aunty Rhoda kuonda
Sei musinga uyi nechingwa?
Wife: Nhai baba mwana zvamave ne 6 months muchishanda kuBakers Inn sei musati mambouyawo nechingwa?
Husband: Iwe baba vako zvavakashanda 35 years kuDoves vakambouya nechitunha?
murume dofo mukadzi chitunha
huya tiverenge mari
Murume: Huya kuno
Murume: ita zvandataura bvisa bhurugwa
Murume: Chiuya pano pamubhedha
Murume: Chindibatsirawo kuwerenga mari
Mukadzi: Saka bhurungwa rangu ndabvisirei
Murume: Ungazondibira mari yangu uchiisa mubhurugwa
murume mukadzi bhedhuru bhurugwa mari
Pakaita bongozozo paCopacabana. Mumwe mukadzi akatenga cascade pane umwe murume zvikanzii, "Ah mukwasha, drink renyu harisi kutonhora wani?" Murume akati zvakutoda Bonde amai. Mukadzi akapopota zvakatyisa achiti ungada bonde neni iwe? Murume uya akazoti, "Kwete amai, Bonde ndiforomani wangu."
murume mukadzi hwindi foromani
TEACHER:Chinozi kana murume akatsvinda achinzi handsome, ko akaipa anozii?
Chinozi: ummmmmmm anonzi ....ipsum!!
murume chinoz kushata-kunaka ipsum
murume mukadzi hure muchato
murume mukadzi pastor sisi sisi vebasa whatsapp whatsapp status
Uri mwana here iwe
Mukadzi akabvunza murume wake kuti iwe why usingade kunditengera ma sweet. murume akati uri mwana here
murume mukadzi mwana
Tese tiri varidzi
Hanzi siyana nemukadzi wemuridzi. Asiri muridzi ndiani? Kungoti maridziro, kwekuridzira nechekuridzisa ndozvakasiyana asi tese tiri varidzi
Nguva yekutenda pa Radio Zimbabwe
Radio Zimbabwe. Nguva yekutenda.
D.J - Hello paRadio Zimbabwe.
Caller - Hello. Ndirikuda kutendawo.
D.J - Taurai henyu nyaya yenyu.
Caller - Ndawanikidzwa namadam ndiine girlfriend inogara musame line nesu. Vabva vamhanya kumba kwakunoisa 2l yecooking oil pastove. Ndichingopinda padoor vabva vandidira poto yese yemafuta, wanike Handina kutsva. Madam vabva varangarira kuti hakuna magetsi. Saka ndoda kungotendawo VEZESA nebasa ravo guru ravari kuita rekudzima magetsi. Rambai makadaro.
murume mukadzi zbc zesa radio-zimbabwe radio-2
Ko makamuka rinhi?
Helo, helo ndiani?
Imi ndimi ani mondibvunza kuti ndiani pafoni yangu?
Ndaona number dzako mufon yemurume vangu?
Saka mamuchibvunzirei maona zita?
Ndokumbirawo usiyane nemurume vangu..
Hoo makamuka rinhii?
Kumakuva,murume venyu akati makafa? Aitondinyengawo ndikamuramba ndichiti handidanane nevanhu vakafirwa manje zvamuri vapenyu ndakutomuda
murume phone makuva amai
Murume achitengera mukadzi wake Bra
Ko yemazamu iyi pakazopinda vamwe blaz muBotique ndokuti "Ndirikudawo bra yaMadam vangu. Asi handizivi kuti vanopfeka size ipi. I just want to surprise her" Zvikanzi naShop owner. "Hazvinetse, ane mazamu anenge maPaw paw here?" zvikanzi "Kwete, maPaw paw akurisa" zvikanzi "ko maOrange?" zvikanzi "kwete, maOrange akurisa zvakare." zvikanzi "semazai?" Zvikanzi "exactly, semazai, but ari maFried".
Ndiyani anokuti 'Beautiful' pakati peusiku iyeye?
Veduwe zviri mudzimba zvakaoma. Mukadzi nemurume vakarara fon yemukadzi iri pacharge. Time yava around 0000hrs murume akamuka anzwa fon yemukadzi ichirira kamwe kasound. Paakaitarisa akamutsa mukadzi. Murume ndokut kumukadzi wake;" Ndianiko anokutumira message yekuti BEAUTIFUL pakati peusiku kudai"? Mukadzi akabva apindura murume wake nehasha zvikanzi,"Kana musingachaoni endai mundoparwa maziso baba, pakanzi BEAUTIFUL here apa kana kut pakanzi BATTERY FULL?"
murume mukadzi phone whatsapp godo
Ndidzokorore here? Makwikwi eNzou
Vamwe baba vaifarira zvekutamba njuga, rimwe zuva vakaverenga mupepanhau maive makashambadzwa nzou yaiitiswa competition.
Zvainzi kwaidiwa munhu anokwanisa kuita kuti nzou iyoyo icheme. Paihwinwa mari ine chitsama. Mudhara akagaya munyati, ndokuenda kumakwikwi aya.
Mudhara uya akasvika akaona vanhu vakawanda vachizama nzira dzose asi nzou isingacheme. mdhara Akaongorora nzou iya akaona iri hadzi akati hazvinetse, akabva akumbira kuti vanhu vese vamupe mkana ndokuupihwa. Akabva anyahwaira ndokuenda kushure kwayo achibva aita zvekutunga nemusoro uchibva wanyura munhengo yesikarudzi yenzou iya. Ipapo ipapo nzou yakanzwikwa kuchema yarwadziwa ukuwo mdhara musoro wakuramba kubuda, vanhu vakatozoita bishi kumukakata kuti abude ndokumumhanyisa kuchipatara sezvo ainge akomoka nekushaya mweya wekufema asi akanga atohwina.
Zvino, after 2 days mdhara uya akaonazve mubepanhau nzou imwecheteyo yadzoka zvekare mucompetition asi this time kwaidiwa munhu anoita kuti nzou iyi igutsurire musoro yobva yazoudzungudza zvekare.
Mudhara akafunga mari ndokumhanya kumakwikwi aya zvekare. Akasvika kuya ndokuona vanhu vari mushishi kukakatana nemusoro wenzou aasi isingabvume zvavaida. Akakumbira mukana vanhu vakambomuseka vachiti aifunga kuti angabudirire here sezvaakamboita pakutanga.
Zvisinei vakamupa mkana, mdhara akangoenda kumberi kwenzou kwakuizevezera munzeve achiti:
Nzou yakagutsurira musoro mdara ndokuti:
"Ndokudzokorora zvandakambokuita futi?"
Nzou yakabva yadzungudza musoro vanhu vose vakaombera maoko mudhara akabva atohwina!
murume makwikwi mhuka nzou
Mai Chisamba - Kujairira basa kwakaoma
Mai Chisamba vachitaura nemurume wavo:
Hubby: My love, I love you with all my heart!
Mai Chisamba: Eheee ndizvozvo varoverei maoko. Mafungiro avowo!!!
murume mukadzi zbc basa mai chisamba imba
murume mukadzi doro eagle lager
Kutemhera vamwe mango mumuti
Hubby: ko zvawanga usingadaire phone wanga uchiitei?
Wife: ndanga ndiri mumuti ndichitemera shamwari dzenyu dzekubasa mango
Hubby: aaaaaah!! ivo vanga vari pai?
Wife: vari pasi vachinhonga.
Hubby: iwe aah shit dai usina kukwira hauone kuti vanga vachida kukuonerera brugwa rako here?
Wife: ndazviziva ndosaka ndaribvisa brugwa racho ndatokwira ndisina.
murume dofo mukadzi bhurugwa
Ungazondibira mari yangu
Murume: itazvanda taura
murume: bvisa bhurugwa
murume: ndibatsire kuverenga mari yangu iyi
mkadzi: saka ndozvandabvisira bhurugwa rangu
murume: ehe ungangondibira imwe uchiisa mubhurugwa.
murume mukadzi mari
Usandinetse ndakuda kurara
Wife: Perfume yemukadzi yamuri kunhuwa maitorepi
Husband: Ndagumwa naamai vandanga ndakagara navo mukombi
Wife: Ko Lipstick iri pamuromo maiwanepi?
Husband: Ndaiwana kuna amai Julie pandanga ndichivakorokotedza
kupasa kwavakaita ku night school
Wife: Koma used condom ari muhomwe
Husband:Siyana neni ndakuda kurara
Wife: But hazvisi fair isu tikashandisa hatimbouya nawo kumba
Wife: Usandinetse ndakuda kurara
murume mukadzi condom
murume doro muroora manyoka vamwene
Chinoz - Ko hamusi kunzwa chando here?
Wife : ko nhai baba mwana nechando chiriko ichi apa hamuna juzi, hamusi kutonhorwa here??
Chinoz: uuuhmm I think ndatova ne problem yenzeve.handisi kunzwa chando
murume mukadzi chinoz chando
Munyama uri kumbobvepi
Murume: mai mwana hanty paya pandakarwara nemakumbo wanga uineni
Mukadzi: hongu baba
Murume: paya pandakadzingwa basa kwandaishanda wanga uripo
Mukadzi: ichokwadi daddy
Murume: pandakatsikwa nemota waingova neni
Mukadzi: ehe ishuwa darling
Murume: munhamo nematambudziko ese wanga uripo
Mukadzi: its true my luv (about to cry nerudo)
Murume: saka ndaona kuti pese pandakatambura waingova neni so: CHISIYANA NENI NDIWE UNONDIPA MUNYAMA!!!
murume mukadzi nhamo munyama
Uri kuchemei pa recipe?
A cheating wife recieved a massage from a boyfriend saying ''Its over....!''
Murume ndokubvunza achiti: ''What are you reading sweetie?''
Mukadzi ndokuti: ''A recipe from mai Tanaka''
Murume: ''Saka uri kuchemei?''
Mukadzi: ''Ndavakuverenga part yekucheka onion ''
murume mukadzi hanyanisi mhere
Tsamba kuna Tete
Dear Aunty Rhoda :
Mukadzi wangu anorara
akapfeka hovhorosi. Pamwe bomber
jacket, pamwe swimsuit , pamwe
track suit. Nezuro akarara ne
overcoat mukati aine skin tight.
Dear Muzukuru, Ukwane iwe wanzwa.
Tenga magumbeze nxaa. Tibvire apo
murume mukadzi Aunty Rhoda kunyima hovhorosi
murume mukadzi doro chidhakwa
Mukadzi oreurura zvitadzo kumurume
Mukadzi airwara serious akati regai ndiudze murume wangu zvandakatadza ndisati ndafa,
Mukadzi : daddy ndakufa ini
Murume : usadaro swty ahufe mwari vanewe
Mukadzi : sorry honey nezvandakaita ndaikubira mari ndichinopa boyfriend yangu pluz Tadiwa ahasi mwana wako ndiwe boyfriend
Murume : ndaizviziva ndosaka ndakuisira poison!
murume mukadzi rudo muchetura
Mubedha wakambo rarwa neumwe mukadzi
Asi vakadzi vakapusa unotonzwa vachizvikudza hanzi handirari pamubhedha wakamborarwa nemumwe mkadzi hee handishandisi midziyo yakamboshandiswa nemumwe mkadzi kkkk ko nhengo yababa yacho munodi kuiramba cz yakamboshandiswa nemumwe mkadzi
Unoita sei kana tikabata lotto
Hubby asks wife:
"Unoita sei ukanzwa kuti ndahwinha lotto?"
Wife: "Ndinotora half yacho ndokutiza."
Hubby: "Ndagona 3 numbers saka ndahwinha $27. Tora $13:50 yako urove pasi."
murume mukadzi lotto gupuro
Ndatonzi ukasimuka hokoyo!
Pastor akapa announcement muchurch kuti murume wese anotongwa nemukadzi ngaauye kumberi,varume vakaita mudungwe kuenda kumberi kukasara kwakagara murume mumwe, Zvinova zvakashamisa pastor. Vakabva vati chitipawo solution kudambudziko ratinaro pano nokuti ndiwe usina problem. The man replied, 'ndatonzi ukasimuka hokoyo'!
murume mukadzi pastor pentecostal domestic violence
Rudo here kuti vanhu vageze vose
Ukanzwa murume achidaidza mudzimai kuti vageze vose everytime usafunga kuti rudo rwakanyanyisa. Kwete bodo, kutya kuti foni inosara ikavhurwa kana kufonerwa nesmallhouse
murume mukadzi phone chikomba small house whatsapp rudo
vanhu rume vaka ngwarawawo
Musadheerere varume zviri mudzimba umu!
Shumba akadzoka kumba pakati pehusiku apa madam BP yakakwira..
Shumba: Mai kim ndivhurirewo door.
Mai kim: Handidi enda kwawanga uri. Inguvai idzodzi?
Shumba: Saka ndakuzvikanda hangu muswimming pool ndife.
Mai kim: Ifa i dont care. Shumba anotora zidombo okanda muswiming pool....juuubwiiiii.
wife panics and rushes out straight kuswimming pool. Shumba opinda mumba okiya door .
Mai kim: Ba kim nhai vhurai door.
Shumba: Wait ndichambofonera hama dzako nedzangu uvaudze kwaurikubva this time wakapfeka pant nebra.
murume mukadzi chikomba swimming pool
vakadzi vava kuwanza makeup
Ikozvino varume vanoto fanirwa kufamba nema dish ne sipo, akaona mukadzi waada oti gezai kumeso asikana tizivane...
Kuitira kuti asazo ita heart attack the next time he sees her..
murume mukadzi kuda zvinhu yellow bone make up
dai hangu ndiri bepa nhau
Murume aigara achiverenga newspaper nguva dzese.
Mukadzi: aaa dai ndiri newspaper
Murume: sei wadaro?
Mukadzi: nekuti waigara wakangondibata
Murume: neniwo ndaishuwira kuti dai waiva newspaper
Mukadzi: sei wadaro
Murume: nekuti ndaiti ndikakuverenga nhasi ndobva ndarasa mangwana ndotenga rimwe.
murume mukadzi rudo bepa nhau
murume mukadzi bhawa shamwari kudyiswa
Masasi ekupenga: madam vakango nyarara
Madam vangu vakangonyarara handisikuziva kuti vambobata fon yangu here kana kuti vari kurwara
murume mukadzi whatsapp nhare
kuyamwa zamu ra amai nere girlfriend
Unoita makore maviri uchiyamwa zamu ramai nhasi ukutadza kuvatengera 2 kg ye sugar chaiyo?
Asi girlfriend kungoyamwa zamu risingabude mukaka wotosiya Tablet (Samsung)
murume mukadzi zamu raamai
Usada kundifadza nenhema
Wife: Handichadi hangu, ndakuenda kumba kwedu, Sara hako uchandifunga rimwe zuva, mangwana chaiye ndiri kuenda
Hubby: Handidi munhu anoda kundifadza nenhema.
murume mukadzi gupuro divorce
masasi ekupenga: nyama kana kuti mince
Bhaibheri rinoti murume nemukadzi vachava nyama imwe. Saka kana iwe wasangana nevakadzi hobho ichiri nyama here or mince
murume mukadzi bhaibheri bonde nyama
Janet: Varume vose imbwa!
Veronica‬: Kana wako ari imbwa havirevi Kuti vose imbwa my sister. Ini wangu is a two headed snake who is unashamful and conniving.a dirty pig asina hunhu. Better wako imbwa chete. learn to appreciate asikana
murume imbwa whatsapp nyoka
Ukaroora mukadzi wako ane usimbe asi ari shasha pabonde, hama dzinoedza kupopota dzichikuudza zveusimbe hwake. Vamwe vanoti murambe, vamwe vanoti chino nechino asi iwe kuti uvaudze kuti ishasha pabonde zvinogumira parurimi. Unoguma wongoti " kungoti chete hamumuzivi!"
murume mukadzi bonde simbe
Madzimai EkuChurch Paruwadzano..
Pastor: Makapedzisira riini kuudza varume venyu kuti "ndinokuda"
Madzmai: Nezuro b4 bed, nhasi kuseni ndaakubuda, manheru, haa daily etc.
Pastor: Shuwa shuwa here madzmai?
Madzimai: Shuwa pamberi paMwari!!!!
Pastor: Ok.Torai mafon enyu.Mumwe nemumwe ngaasende msge yekuti "Ndinokuda" kumurume wake.
Pastor: Chichinjanai mafon enyu makagarisana kudaro.Vese vakachinjana.
Pastor: Mumwe nemumwe achaverenga mhinduro ichauya pafon yaainayo iyoyo ngatitererei tichinzwa.
Mhinduro dzakatanga kunaya kubva kuvarume vemadzimai eruwadzano. Imi woye:
Asi warasika ??
Aaa ndiyani wangu uyu??
Aa muri kurota here??
Asi urikuda mari??
Usade kundinzwa wanzwa!'
Asi waroveresa mota yangu kanhi ?
To hell wanzwa!!
Ndiwo majokes andisingadeee!!
Mesge ngaidzokere kumuridzi wayo iyo!!
Uchafa nekurohwa nhasi, pfambi yemunhu, uchandiudza hako manheru kuti message iyo ndeyani?
Garai muchiudzana mashoko erudo veduweee .
murume mukadzi church whatsapp rudo ruwadzano
whatsapp - ndatambwa nyowani na madam
My wife zvaandiita nhasi atora foni yangu ndobva adhirita nhamba dzaTrish. Semunhu akanzwa kuti ndodanana naTrish nefriend yake abva asevha nhamba dzake kuti Trish. Ndiri kubasa ndaona message yakanzi dia ndiisire airtime ye$10 ndobva ndatumira ndichifunga kuti ndiTrish. Ndave kumba ndazoisa txt kuna Trish ndichiti zvaita here zvikanzi ndifonere izvezvi. Pandabuda panze kuti ndifone ndokutonzwa madam vachidaira varimukicheni vachiti, "Huyai mudye sadza raibva."
Ndodii ndichitori panze izvezvi
murume mukadzi small house whatsapp
nhamo ya 2019
heat wave 2015
zanu pf 2019 primary elections